Zimbabwe: Bridging the Digital Divide in Education - allAfrica.com
Zimbabwe: Bridging the Digital Divide in Education
The reintroduction of radio and television in Zimbabwe's educational sector is an important step in bridging a potentially unequal development.
The nationwide schools closures, affected almost two-thirds of the world's student population. In the case of Zimbabwe, the conversations exploring delivery of education began last month and involved the Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC).
The majority of Zimbabwean households -- even in the rural areas -- have radio and television sets, ensuring that even children in some of the remotest areas can access education through these media in this era of the coronavirus pandemic.
The beauty of radio and television lessons is that every child/student -- wherever they are in Zimbabwe -- will be exposed to the same lessons, thus levelling the divide that characterises the current position in the educational sector.
Zimbabwe's past experience with radio and television lessons shows that they were an effective tool in capturing the imagination of students.
Top Headlines Education ICT Zimbabwe
It is this awareness that informs the decisions of the Ministry of Primary and Secondary Education to argue that while the initial introduction of this form of delivering education is targeting students, radio and television are going to play a critical role in giving greater acknowledgement and visibility to indigenous languages -- Barwe, Chewa, Chikunda, Doma, Hwesa, Kalanga, Khoisan, Nambya, Ndebele, Shangani, Shona, Tonga, Venda, Tswana and Xhosa.